Somalia: Qaran aan Qaamuuskiisa wax Qeybsiba ku Qorneyn
Wax wada qeybsigu waa aasaaska hoose ee nolosha beni-aadamka. Ka soo billow ninka iyo naagtiisa, ku keen dowladda iyo dowladaha dariska la ah, waa lagama maarmaan in si isle eg ama ugu yaraan si qof walba maslaxadi ugu jirto loo qeybsado awoodaha siyaasadeed, dhaqaale, bulshadeed iyo hogaamineed-ba.
Dhowr sano kahor ayeey ogaadeen baarayaal Mareykan ah oo ku takhasusay Luqadaha in Luqadda carabiga iyo tan Israa'iiliyiintuba (Cibriga) eeysan laheyn hal erey oo u dhigma ereyga English-ka ah ee "Compromise" ama "Wax isu deyn" ama "Meel dhexe isugu imaansho". Khubaraduna wexeey daboolka ka qaadeen in labadan luqadoodba eey dhig ahaan u isticmaalaan weero ama dhowr kalmadood si eey macno ahaan usoo dhaweeyaan ereyga "Compromise". Markii aan dhageysanayey warbixintan waxaan durbadiiba guda galay isku day ah inaan soo helo erey-bixin u dhiganta ereyga (Compromise) oo Somali ah. Markii eey dhowr maalmood igu qaadatayna, waxaan la kaashaday abwaano iyo luqadiistayaal Somaliyeed oo iiga aqoon iyo waaya aragsan Luqadda Somaliga ah.
Qeexidda ereyga Compromise: Ereyga Compromise wuxuu xambaarsan yahay macno qara weyn oo ku wareegaya in aad qof aad is heysataan uga tanaasusho ugu yaraan qeyb kamid ah arrin muhiim kuu ah, adigoo markaas kula kulmaya qofka meel dhexe oo labadiinuba dan idinkuugu jirto, meeshaas dhexena eey alaaba tahay meel looga badbaadayo isku dhac gacanta laga hadlo.
Dumarka Somaliyeed: Doorkoodii shalay iyo maanta
Gabdhaha Soomaaliyeed sidii ay ahaan jireen iyo sida hadda ay Guji...
Dhowr todobaad kadib, waxaa igu soo laabtay raggii aan ka codsaday ineey baaritaankan ila sameeyaan. Wexeey ii sheegeen ineey soo waayeen hal erey oo u dhigma ereyga Compromise oo Af-Somali ah. Dabcan waxaa la heli karaa tobaneeyo Weer oo macno ahaan u dhow ereyga Compromise. Hadii eey jirto cid soo hali kartana, waxaan si naxariis leh uga codsanaa ineey E-mail-ka iigu soo hagaajiyeen iyagoo mahadsan.
La yaab malahan in luqadaha qaar eeysan laheyn ereyo gooni ah. Tusaale ahaan Luqadda Fransiisku malahan hal erey oo u dhigma "Wanaag " ama "Nice". Shiinuhuna malahan hal erey oo u dhigma "Gaar ahaansho" ama "Khaas ahaansho" ama "Privacy" ! Laakiin weey kala nasiib badan yihiin ninka eey ka maqan tahay "Gaar" iyo ninka eey ka maqan tahay "Meel dhexe isugu imaansho " ama "Compromise" Ereyga ugu soo dhow ee aan soo heli karo wuxuu noqday "Isu-tanaasulid " oo iyaduna woxoogaa ka macno duwan "Compromise".
Maxaa naga dhexeeya Annaga, Carabta iyo Israa'iiliyiinta ?
Markii aan natiijooyinkaas helay kadib, waxaa ii soo ifbaxday xiriirka dhidibadda aastay ee ka dhexeeya wax wada qeybsi la'aanta ama meel dhexe isugu imaansha la'aanta ka aloosan dadkan aan laheyn kalimada "Compromise". Waa laga yaabaa ineey jirto kalimad macne ahaan dabooli karta ereygaas oo carabi ama Somali ah. oo oran maayo baaritaanka khubaradani sameeyeen ayaa tiimbareeysan oo wax kale oo runsheegi karaayi majiraan.
Dabcan jawaabta fudud ee su'aashani waa in "meel dhexe isugu imaansho la'aan" uu ka dhexeeyo Somalida, Carabta iyo Israa'iiliyiintba.
Wexeey ila tahay in marba hadii Qaamuuskeenaba laga la'ayahay aan wax qeybsanno ineey siiba rajjo xumeyneyso sida aan wax ku qeybsan laheyn. Intaas waxaa sii dheer, Beleda ka jirta Bariga dhexe oo mid loo tabar la'ayahay ku soo biyo shubatay, hadii eey musiiba luqadeedi nagala dhexeeyso waaba iyana nasiib xumo sii laban laaban. Waxaad maqleysaa marka ereyga "Peace" ama Nabadgalyo la soo hadalqaado in dadka qaar eey ku deel-qaafaan "...In the middle East" oo kuu sheegeysa sida soo jireenka ah ee nabaddu uga fogtahay bariga dhexe. Sidoo kale, qofka Somaliga ah markii eey wax si ka yihiin waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo "...War ninyahow xaalkeeygu waa Bariga Dhexe " oo dabcan loola jeedo waa mid xalkiisu u adag yahay sida arrinka bariga dhexe oo kale!
Taariikh ahaan markii aad dib u milicsatid qaab soo jireenkii wax qaybsiga ama wax qeybsi la'aanta Somalida, waxaa kuu cadaaneysa in Alleylehe eey wax ka jiraan "Meel dhexe isugu imaansho la'aanta " la sheegayo. Qofka Somaliga ah hadii aad wax isku qabataan xalka ugu horeeya ee maskaxdiisa ka soo burqanayaa waa xoog ku dhamee arrinkan. Amaba ugu yaraan la dagaal qofkan. Iyadoo laga yaabo in uu heli karo inaad meel dhexe isugu timaadaan. Dabcan waa marag ma doonato in Juffooyinka hoose ee maanta dhowr nin oo iyaga ka socota eey leeyihiin waxan wada mataleynaa lafteena eey daliil cad u tahay Compomise la'aanta Somalida.
Markhaati ma doonato kale waxaa ah cadadka shirarka la yiri waxaa "meel dhexe leysugu keenayaa " kooxaha Somalida. Sidee meel dhexe leysugu keenaa, luqadooduba ma qoreyso'e in meel dhex leysugu yimaadee ? Wexeey ila tahay in dowladaha dariska ah ee tobanaanka shir noo qabtay iyo dhex dhexaadiyayaasha shirkuba, sida Mr.Kilpagati-ba eey jeclaan lahaayeen ineey caawa ogaadaan in Qaamuuskeena laga la'ayahay erey-bixin qeexeysa "aan meel dhexe isugu imaano". Ugu yaraan wexeey dib uga fikiri lahaayeen sida eey u adag tahay in laba qof oo Somali ah "meel dhexe" leysugu keeno, iskaba daa 350 iyo dheeraad qofe !
Tusaale kale oo sii adkeynaya xaqiiqnimada in luqadda Somaligu eeysan laheyn "Compromise" waxa weeye magac-dhowga shirarka Somalida oo ah mid loogu yeero "Dibu heshiisiin" halka runtu eey tahay in "meel dhexe" leysugu yimaado ama Compromise leysu sameeyo intii la heshiin lahaa. Heshiisku -- Aniga sidaan u fahamsanahay -- wuxuu luqad ahaan qeexayaa raali gareyn oo kaliya. Oo wuxuu ila yahay adigoo yiri oo kale "Saaxiib, iga raalli noqo" Deedna raba inaad qofkii aad hadda is raalli gareyseen kuwada heshiisaan arrinkii aad iska raalli gareyseen. Sidaas awgeed ayeey kooxaha Somalidu shirkasta isku raalli gareeyaan, dabadeena maalinta xigta doonaan ineey kuwada noolaadaan arrinkii eey iska raali gareeyeen ! Sow kulama ahan marka ineey aheyd ineey "Meel dhexe " isaga yimaadaan arrimaha eey isku heystaan? Adduunka muhiim beey ka tahay erey bixinta khuseysa arrimaha mustaqbaliga ah ee u baahan xalka nuxurka leh.
Bal waan arkeynaa halka "Dibu-heshiisiintu" ku danbeyso, iyo bal in mar uun loo soo baahdo "Meel dhexe isugu imaansho " ama "Compromise.